Ny tsipika manjavozavo amin'ny marketing dia miverina amin'ny fampiasam-bola | Martech Zone
Ny tsipika manjavozavo amin'ny marketing dia miverina amin'ny fampiasam-bola
Zoma, Martsa 28, 2014 Zoma, Martsa 28, 2014 Douglas Karr
Omaly, nanao session aho tao amin'ny Social Media Marketing World nantsoina Ahoana ny fomba hiovàna amin'ireo mpanaraka tsy mitsaha-mitombo ka hamoahana vokatra amin'ny media sosialy. Matetika aho mifanohitra amin'ny torohevitra atosika tsy an-kijanona amin'ity orinasa ity… na dia miankina kely amin'ilay mpampifamaly aza. Ny tena fotony dia ny orinasa manohy mitady fitomboan'ny mpankafy sy ny mpanaraka ao amin'ny media sosialy - saingy manao asa mahatsiravina tokoa izy ireo amin'ny famadihana ireo mpanatrika na vondrom-piarahamonina mahatalanjona izay efa mipetraka.
Tao anatin'ilay fotoam-pivoriana, nandeha nanontany ny ankamaroan'ny Fandrefesana ROI milaza any ivelany raha ny amin'ny fiverenan'ny fampiasam-bola ho an'ny ezaka ataon'ny media sosialy. Iray amin'ireo namana akaiky indrindra an'ity bilaogy ity i Eric T. Tung… Iza no nibitsika hoe:
Aza mankany @Nichole_KellySesi-pivoriana, fa ny ROI media sosialy dia BS! @douglaskarr # SMMW14
Tena nampihomehy indrindra izany satria ny mpiara-miasa amiko (sy karaoke) nohajaiko tsara, Nichole Kely, niara-nizara ny fotoanany: Ny marika dia mamerina ilay lambam-baravarana amin'ny fandrefesana ny ROI media sosialy. Doh!
Tsy hoe tsy mino aho hoe misy a fiverenana amin'ny fampiasam-bola - Mino aho fa misy tambiny lehibe fampiasam-bola ho an'ny fiarahamonina. Raha ny marina dia mino aho fa tsara lavitra noho ny ankamaroan'ny orinasa mino izany ankehitriny. Ny olana dia ny fandrefesana. Misy fomba maro mahomby amin'ny ezaka ataon'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fiverenan'ny fampiasam-bola:
Attribution mivantana - nahita ny hafatra ny olona dia nanao ny fividianana izy ireo.
Attribution tsy mivantana - nizara ny hafatra ny olona na nanondro olona anao ara-tsosialy ary izy ireo no nanao ny fividianana.
Fanondroana marika - mahita ny olona ianao an-tserasera ary mahita anao ho fahefana amin'ny indostriao, mitarika azy ireo hikaroka ny vokatrao sy ny serivisinao.
Attribution Attribution - manaraka anao amin'ny Internet ny olona, ​​mahazo ny fitokisany ianao, mitarika azy ireo hividy ireo vokatrao sy serivisinao.
Mora refesina ny fanondroana mivantana… ny fanarahan-dia fanentanana tsara ary azonao izany. Ny olana amin'ny mandrefy ROI media sosialy miaraka amin'ny hafa. Tsy mampiasa ny fanarahan-dia ataonao foana izy ireo - na tonga izy ireo mividy amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra amin'ny Internet hafa.
Google Analytics dia manana fitaovana mahafinaritra antsoina hoe Multi-Channel Conversion Visualizer izay ahitanao raha mampiasa fomba marobe ny mpitsidika anao hahatongavana amin'ny tranokalanao. Amin'ity pikantsary ity etsy ambany - dia azonao atao ny mahita ny toerana manjavozavo. Ny isan-jato lehibe indrindra amin'ny fanovana an'ity tranonkala ity dia avy amin'ireo olona niditra tamin'ny tranokala tamin'ny fomba mihoatra ny iray.
Na dia azonao atao aza ny manatsoaka hevitra fa tsy manana programa marketing mailaka tena tsara izy ireo - ny fampiharana ROI marina amin'ny fifamoivoizana amin'ny referral mifanohitra amin'ny fikarohana biolojika dia tsy azo atao satria tsy afaka miditra amin'ny lohan'ny mpitsidika rehetra ianao ary manapa-kevitra. izay Ny fantsona no fampiasam-bola nahatonga azy ireo nanapa-kevitra ny hividy.
Hanaiky aho fa tsy izany izay, fifandanjana daholo izy rehetra. Ireo mpivarotra dia tsy maintsy hahatakatra ny fiantraikan'ny paikadiny tsirairay avy amin'ny iray hafa. Rehefa mampihena ny ezaky ny haino aman-jery sosialy ianao, ohatra, dia mety hisy fiatraikany amin'ny fiovam-pivarotanao fikarohana! Fa maninona Satria tsy liana te hahafantatra ny vokatrao sy ny serivisinao ny olona ka tsy mitady anao izy ireo. Na tsy manana fahatokisana izy ireo, ka mitady mpifaninana manana fiarahamonina tsaratsara kokoa ary hiova fo miaraka aminy. Sa miresaka momba ny mpifaninana aminao izay do manana fanatrehana ara-tsosialy miavaka… izay mitondra amin'ny lahatsoratra fanampiny momba ny fifaninanana… izay mitondra azy ireo ho tsara toerana kokoa.
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia mila vinavina mialoha isika Analytics fitaovana izay mahafantatra ny fiantraikany sy ny fifandraisan'ny ezaka rehetra ataontsika - manampy anay hahatakatra ny fomba fifampihinanany sy ny fomba fiasan'izy ireo. Tsy intsony raha te hizara ara-tsosialy sy handrefesana ny fiverenan'ny ezaka amin'ny fanondroana mivantana isika, resaka fitsapana sy fanitsiana ny ezaka ataon'ny haino aman-jery sosialy sy ny fijerena ny fiatraikany amin'ny paikady amin'ny ezaka ara-barotra nomerika rehetra.
Ny asantsika dia tsy mamantatra intsony hoe inona no fitaovana ampiasana… resaka fandanjalanjana loharanon-karena hanatsarana ny ezaka ataontsika tsirairay avy. Alao sary an-tsaina toy ny tabilao fanamafisam-peo ny dashboard anao, mihodina sy midina ireo diala mandra-pahatongan'ny mozika mahafinaritra. Fiverenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny media sosialy afaka refesina - saingy manjavozavo kokoa ny tena zava-misy noho ny torohevitra sasany any.
Fanamarihana: Ianao dia afaka mividiana pass virtual ho an'ny World Media Marketing World ho an'ny ampahany amin'ny vidin'ny fanatrehana ary azonao atao ny mihaino ny fotoam-pivoriako sy ireo famelabelarana hafa rehetra!
Tags: marketing marketing atiny roimailaka miverina amin'ny famatsiam-bolamailaka roimarketing roimroikarama fikarohana roifiverenana amin'ny fampiasam-bolafikarohana marketing roifiverenan'ny media sosialy amin'ny fampiasam-bolahaino aman-jery sosialy roi
Fahatokisana, haino aman-jery sosialy ary faniriana manohana
Mar 28, 2014 ao amin'ny 3: PM PM
Ah, ny fanjakako ho an'ny fitaovana automatique ara-barotra tsara izay afaka manara-maso ny fitenin'ny vatana nomerika sy mitantana ny varotra amin'ny fantsona marobe, ny fanaovana scoring, sns…. oh, andraso. 😉 #Eloqua.